Lehenga पछाडि ब्लाउज डिजाइन यो विवाहको मौसम कोशिस गर्न - सेलेब स्टाइल
Lehenga पछाडि ब्लाउज डिजाइन यो विवाहको मौसम कोशिस गर्न
Lehenga Back Blouse Designs Try This Wedding Season
ब्लाउज आधारभूत भारतीय पोशाकलाई पुन: मद्दत पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउन सबै भन्दा सजिलो छ, जबडा-छोड्ने नम्बर। धेरै लामो ब्लाउजहरूले पल्लुको जटिलताको छायामा सहयोगी भूमिका खेल्थे। हालसालै यो अद्भुत रूपले परिवर्तन भएको छ किनकि धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ताहरूले प्रयोग गर्न रुचाउँछन् कुनै अनौंठो चीजमा आफ्ना हातहरू लिन। यसले डिजाइनरहरूलाई उनीहरूको रचनात्मक छनौटहरूको साथ बढ्दो बोल्ड हुने बाटो पनि प्रशस्त बनाएको छ। ब्लाउज पोशाकको सबैभन्दा रमाईलो हिस्सा हो र सजिलैसँग सम्पूर्ण लुक बनाउन वा बिच्छेद गर्न सक्दछ।
यो सांस्कृतिक मुख्य केही अघिल्लो मा चमक्यो चाडको मौसम र हामी यहाँ छौं तपाईलाई यो भन्न कि यो कुनै पनि समयमा चाँडै परिवर्तन हुँदैन। यस सम्पूर्ण कथाको प्रख्यात भाग ब्लाउजको प्रत्येक पक्षको निरन्तर रूपान्तरण हो तर मुख्य रूपमा पछि। ब्लाउजको पछाडिको भाग हड्डीको माथिको हिस्सा ठीक सँगै बसियो।
यहाँ Cholis / ब्लाउज को लागी केहि समकालीन फिर्ता डिजाइन को एक राउन्डअप छ। पछिल्तिर स्क्रोल गर्नुहोस् कुन पछाडि डिजाईनले उत्तम काम गर्छ भनेर विस्तृत रूपमा हेर्नको लागि।
१ बहु डोरिस ब्लाउज
दुई रिवर्स यू (स्ट्रिंगको साथ) ब्लाउज
3 भरपर्दो ब्लाउजको साथ सरासर पछाडि
चार डीप यू ब्लाउज
।। फ्रिंज बोर्डर ब्लाउज
। वर्क ब्लाउज काट्नुहोस्
।। उच्च घाँटी ब्लाउज
।। U आकारको (स्ट्रिंगको साथ) ब्लाउज
9 वर्ग पछाडि (स्ट्रिंगको साथ) ब्लाउज
१० राउन्ड पट ब्लाउज
एघार टाई अप ब्लाउज
१२ प्रिय पछाडि ब्लाउज
१। FAQs: Lehenga ब्लाउज पछाडि डिजाइन
बहु डोरिस ब्लाउज
एक डोरी एक शुद्ध सनसनीक चिम्चा हो। बहु डोरिस? त्यो वास्तविक हो। राम्रोसँग निर्माण गरिएको र कुशलतापूर्वक डिजाइन गरिएको, यी ब्लाउजहरू तूफानबाट तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको कुनै पनि कोठा लिन सक्दछ। यो ब्लाउज न्याय गर्न विस्तृतको लागि चरम आँखा लिन्छ। जसरी यो जान्हवी कपूरले लगाएको ब्लाउजमा अवलोकन गर्न सकिन्छ, यो शैली युवा र चंचल छ। ओभरसाइज लेटकान्सको जोडले यसलाई पूरै नयाँ तहमा पुर्‍याउँछ।
शैली सल्लाह: तटस्थ र colors्गले लामो यात्रा गर्छ र सबै चीजसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। यसको साथ प्रयोग गर्नको लागि आफैंमा केही आधारभूतहरू पाउनुहोस् पोशाक को विविधता । डोरिसलाई बाँध राख्नुहोस् तपाईले यसलाई हटाउनुभए पछि पेस गर्नबाट रोक्नको लागि।
रिवर्स यू (स्ट्रिंगको साथ) ब्लाउज
TO चोली आयोजित एक साथ स्ट्रि by्ग एक पोशाक डिजाइनर मनपर्ने छ। हामीले यसको संस्करणहरू धेरै पटक स्क्रीनहरूमा पनि देख्यौं। यस नम्बरमा सोनम कपूर एक प्रेरणा हो।
शैली सल्लाह: तपाईं स्ट्रि ofको लम्बाइ बढाउन वा घटाउन सक्नुहुन्छ र कसरी जाँच्न इच्छुक ओटीटीको आधारमा टेस्सल वा विशाल ल्याकनहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
भरपर्दो ब्लाउजको साथ सरासर पछाडि
एक सरासर ब्लाउज परम्परागत साडीको साथ पूरक हुन्छ। पोडिस आधा कवच सजावटमा र साना पोतली बटनहरू द्वारा समाहित गरियो मात्र आश्चर्यजनक छ। सरासर पछाडि ब्लाउज शैलीहरू एक साँझ को घटना को लागी उपयुक्त हो। कोतवाडा साडीको यस घरमा पत्रलेखा चाँदीको दर्शन हो।
शैली सल्लाह: कपडाको न्यानोपनको साथ प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं ब्लाउजको हल्कापन पूरक गर्न केहि भारी कपडा मिलाउन सक्नुहुन्छ।
डीप यू ब्लाउज
यसलाई विचार नगर्नुहोस् सामान्य जस्तो ब्लाउज शैली किनभने सांसारिक ठाउँमा उदात्त छ। यस नेकलाइनले समयको परिक्षण खडा गरीरहेको छ र यसले हामीलाई प्रत्येक इन्भेन्शनको साथ तलसम्म पु .्याउँछ। यो मनीष मल्होत्रा ​​पहिरिएको थियो सोनम कपूर आहूजा , नाटकीय flair को एक स्पर्श संग छिडकिएको, अल्ट्रा आधुनिक मा संकेत अझै परंपरागत जरा बाँकी छ।
शैली सल्लाह: रंग उज्यालो रंगको लागि चाँदीको हिलको पपको लागि। यस रूप मा हेयरस्टाइलमा यसको सम्पूर्णतामा रूपान्तरण गर्ने शक्ति छ।
फ्रिंज बोर्डर ब्लाउज
एक फ्रिन्ज्ड सीमा विवरण मिनी लेटकन र एउटा पुरानो क्लासिक गोला घाँसबाट बनेको छ। के माया गर्नु हुँदैन? पूजा हेगडेले लगाएको फ्रिन्ज बोर्डरको साथ मोती डस्टड चोडी यस ब्लाउज डिजाइनको खाका हो। मनीष मल्होत्रा ​​नम्बर भएकोले यसले अपेक्षाहरू पार गर्छ र पहिरनकर्ता ड्रप-डेड भव्य देखिन्छ।
शैली सल्लाह: तपाईंको कपाललाई पछाडि बाँड्नुहोस् अधिक पछाडि फ्लन्ट गर्नका लागि। यो शैली लेहेन्गाको साथ जोडी बेजोड छ।
वर्क ब्लाउज काट्नुहोस्
आधुनिक ठाउँका लागि अपील गर्ने अझ अर्को आला शैली, काटिएको कामले लुक तीव्र रूपमा बढाउन सक्छ। यो एक lehenga वा एक संग जोडी सही साम्फनी मा साडी । MK साडीद्वारा जेडमा कंगनाले प्रदर्शन गरेको खुला ओपन पछाडि पारंपरिक ब्लाउजमा न्यूनतम ट्वीकको साथ हेराई सुन्दर तरीकाको तरीका हो।
शैली सल्लाह: डोरी बन्दको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ। साडीमा ह्यान्डवर्क न्यूनतम राख्नुहोस् ब्लाउज चम्काउनको लागि नदेखिने गरीरहेको देख्नुहोस्।
उच्च घाँटी ब्लाउज
सामान्यतया, हाई-गर्दनले बिना कटआउटको साथ वा पछाडि उच्च ब्याक ब्लाउजलाई जनाउँदछ। यो शैली वर्कवेयर साडी र च्यानलहरूका लागि पुरानो स्कूलको लागि अधिक लोकप्रिय छ बलिउड ग्लैम । हामीले यो शैली समय र समय फेरि हाम्रो इन्स्टाग्राम फिडमा देख्यौं र निश्चित रूपमा तपाईंको उत्सवको वार्डरोबमा हुनुपर्दछ। नेभि साडीको साथमा केसरि जरी ब्लाउज कालरहित मैग्नेटिक छ र ट्याप्सीले यसलाई प्रो जत्तिकै बोक्छ।
शैली सल्लाह: उच्च फिर्ता घाँटीको साथ पूर्ण आस्तीनहरु घाई जस्तै हंसलाई जोड दिन्छ। तपाईं यसलाई नक्कल घाँटी वा मन्डारिन कलर थपेर अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
U आकारको (स्ट्रिंगको साथ) ब्लाउज
स्ट्रि or वा डोरी यस डिजाइनमा हाइलाइटिंग सुविधा हो। ब्लाउजको पछाडि ड्रस्ट्रिring क्लोजर राखिएको छ। डोरीसँग एक सौन्दर्य अपील छ जुन ध्यान आकर्षण गर्न बाध्य छ। यदि तपाइँ कम्मरमा तपाइँको साडी वा पोशाक लगाउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाइँको डोरि-मा जानु पर्ने डिजाइन हुन सक्छ। श्रद्धा यस सामान्य तर स्वादिष्ट सेटमा एक उचित मराठी मुलगी जस्तो देखिन्छ।
शैली सल्लाह: हेराई पूरा गर्नका लागि नाथ जोड्नुहोस् र यसलाई परम्परागत बनाउनुहोस्।
वर्ग पछाडि (स्ट्रिंगको साथ) ब्लाउज
वर्ग पछाडि U वा V आकारको डिजाइनको लागि एक निर्दोष प्रतिस्थापन हो। अनन्त कालरहित र विश्वव्यापी चापलुसी। यो दुबला फ्रेमहरूको लागि वास्तवमै राम्रो काम गर्दछ र पछाडि केही आयाम दिन्छ। क्याट्रिना कैफले सजिलैसँग सब्यसाची साडीमा स्क्वायर फिर्ता लिइन्।
शैली सल्लाह: नेटसँग यो शैली जोडी गरेर स्पटलाइट चोरी गर्नुहोस् साडी वा लेहेंगा ।
राउन्ड पट ब्लाउज
प्राचीन कालदेखि नै सबैभन्दा लोकप्रिय फिर्ता ब्लाउज डिजाइनहरू मध्ये एक। यी कि त भारी कढ़ाई वा सूक्ष्म रूपमा नजिकको गाँठो संग बाँध्न सकिन्छ घाँटी को निप । साना विवरणहरू जस्तै पाइपिंग, टेस्सल वा डोरीले यस दृश्यलाई बढाउछ र ग्लैमरस बनाउँदछ। आलिया भट्टले एक बटनको साथ यो राउन्ड ब्याक शैली समाप्त गर्‍यो। यो सँगसँगै केही भारी chandbalis र एक जीवन्त साडी थियो।
शैली सल्लाह: पछाडि फ्लन्ट गर्न निश्चित गर्नुहोस् तपाईको कपाललाई बनमा राख्नुहोस्। तपाईं या त केहि कथन झुम्का लागि जान सक्नुहुन्छ वा बेयर गर्न सक्नुहुन्छ।
टाई अप ब्लाउज
केही ’s० को आकर्षणको साथ प्रतिबन्धित लालित्य, टाई अप ब्लाउजहरू यहाँ छन् र बस्नको लागि। तिनीहरू tr chs ठाँउ हो र एक खजाना रहनेछ तपाईको वार्डरोबमा धेरै समय सम्म। इजाबेल कैफ आफ्नो पिचिका रेशम ऑर्गेन्जा लेहेंगा र शिफन डुप्ट्टासँग नॉटटेड सिल्क ब्लाउजमा लुकिरहेकी थिइन्।
शैली सल्लाह: सफ्टर र फ्लुइड कपडाले यस शैलीको ब्लाउजसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। तपाईं केहि रेट्रो सनग्लासहरू जोडी गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रिय पछाडि ब्लाउज
दुबै अगाडि र पछाडि एक बहुमुखी डिजाइन, गहिरो प्यारी पछाडि ब्लाउज डिजाइन प्रमुख छ। एक अस्पष्ट स्त्री आकार, यो एक हृदय आकार को सम्झना दिलाउने हो। यसमा केही कढ़ाई थप्नुहोस् र यसलाई रेशम साडीसँग पेयर गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो हातमा एक विजेता पाउनुभयो। करिश्मा कपूर नवरात्रिका लागि डिजाइन गरिएको प्रियाल प्रकाश घरको आधा साडीमा सास फेर्दैछिन्।
शैली सल्लाह: यसलाई करिश्मा जस्ता बनाउनुहोस् म Keep्ग टीकाका साथ स्टेटमेन्ट इयररिंगको साथ जोडीलाई अधिक आधुनिकमा रूपान्तरण गर्न।
FAQs: Lehenga ब्लाउज पछाडि डिजाइन
Q. आधारभूत पछाडि ब्लाउज डिजाइनहरू के हुन् जुन सबैजनाको अलमारीमा हुनु पर्छ?
TO यसको बारेमा जानको लागि अधिक व्यावहारिक तरीका भनेको टुक्राहरू फेला पार्नु हो जुन एक भन्दा बढी साडी वा लेहेन्गासँग राम्रोसँग जान्छ। यसरी तपाईं तिनीहरूलाई घुमाउन सक्नुहुनेछ व्यापक खर्च बिना। क्याप्सूल वार्डरोब प्राप्त गर्न स्ट्रिंगको साथ U आकारको र वर्ग फिर्ताको साथ मूल कुराको लागि जानुहोस्। कम्तिमा एउटा कथनको टुक्रा छ कुनै पनि अवसर मा स्विच गर्न को लागी।
Q. के विभिन्न शरीर आकारहरू पनि फिर्ता कस्तो प्रकारको हामीले पाउनु पर्छ भनेर विचार गर्न कारक गर्दछ?
TO हो। जे होस्, यो कुनै समस्याको रूपमा त्यस्तो हुँदैन जब तपाईले आस्तीनको लागि डिजाइन गर्नुपर्दा वा पोडिसको अगाडि निर्णय गर्नुपर्दछ। दिमागमा राख्नको लागि केहि चीजहरू हुन् - तपाईको घाँटीको लामो विस्तार छ भने मात्र उच्च घाँटी शैलीका लागि जानुहोस् अन्यथा यसले तपाईलाई छोटो देखाउन सक्छ, डोरिसले अनावश्यक बल्ज सिर्जना गर्न सक्दछ यदि धेरै कडा बाँधिएको छ भने। त्यो बाहेक, पछाडि डिजाइनहरू एकदम बहुमुखी छन्।
Q. के यी डिजाइनहरू दैनिक / कार्य पोशाकको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ?
TO हो। यो सबै कपडामा छ। यो कार्यस्थल उपयुक्त बनाउन त्यहाँ सबै कामकाजी आइमाईहरूको लागि, हल्का कपडाहरूमा माथि उल्लिखित कुनै पनि डिजाइनहरू, सूक्ष्म टुक्राहरूको साथ एक्सेसोरिज गरिएको आश्चर्यजनक ढंगले काम गर्न सक्दछ। उच्च घाँटी डिजाइन प्राय: जसो व्यावसायिक र सुरुमा राम्रो देखिन्छ एकै पटक प्रयोग गरिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: तपाइँको आधारभूत पोशाकहरूमा एक Quirky ट्विस्ट थप्नुहोस्। यी ताराले तपाईंलाई कसरी देखाउँछन्
पेट को बोसो कम गर्न को लागी crunches
पेटको बोसो घटाउनको लागि उत्तम व्यायाम के हो
पातलो पातलो रोक्न कसरी
कपाल झर्ने नियन्त्रण र विकास को लागी घरेलु उपचार